I-Google Home App ye-PC - Landa ku-Windows 10 ne-Mac - Izinhlelo Zokusebenza
Emncintiswaneni wezinsizakalo zasekhaya ezihlakaniphile, i-Google ilethe ukungezwa okumangazayo ku-Google Home. Yipulatifomu ekuvumela ukuthi uxhume amadivayisi wakho we-Google Home ne-Chromecast ngesikhathi esisodwa. Ungalawula amadivayisi ahlakaniphile njengezibani, i-Wifi, nezinhlelo zemisindo ngokulula kwe-Google Home App.
Ikhaya le-Google liyatholakala ngomhlaka- I-Android futhi iOS . Kodwa-ke, ayikho inguqulo esebenzisekayo etholakalayo yesikhulumi se-PC ngokuqinisekile evimbela amandla ayo. Usengasebenzisa isiphequluli se-Chrome ukufinyelela i-Chromecast ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ngaphandle kwalokho, kufanele uthembele ku-Chromecast ukuthola ezinye izinsiza.
Ukubuka konke kwekhaya le-Google:
Ikhaya leGoogle lifana nezinye izinsizakalo zasekhaya ezihlakaniphile ezifana ne-Alexa's Echo. Noma kunjalo, isebenza njengehabhu elilodwa ukuhlanganisa wonke amadivayisi wakho asekelwayo. Ngamazwi alula, uma unamadivayisi ahlakaniphile afana namalambu, abalandeli, izipikha, izibonisi, ama-TV, nokunye okuningi, ungawaxhuma ku-Google Home.
Vele, kufanele bahambisane nezidingo zekhaya le-Google, okungekho ngokweqile. Ngekhaya le-Google, ungakha inethiwekhi yasekhaya ehlakaniphile exhunyiwe. Awudingi ukuthenga i-Google Nest noma amanye amadivayisi, noma. Ukuphela kokufanele ukwenze ukulanda uhlelo lokusebenza ku-Android yakho bese uqala ukuxhumanisa amadivayisi ahambisanayo.
Funda futhi: Izinsizakalo ezi-10 + ezihamba phambili zokusakazwa kwe-TV
Kusho ukuthi lapho ungasebenzisa i-smartphone yakho noma enye idivayisi nge-Google Home app ukulawula ikhaya lakho ngaphandle kwenkinga ngokuphelele. Ngenye indlela, ungasebenzisa umsizi wezwi weGoogle ukufinyelela uchungechunge lwemiyalo futhi usebenze nganoma yini nganoma iyiphi indlela oyibona ifanele.
Ngaphezu kwalokho, ngasikhathi sinye, ungafinyelela kuma-imeyili akho nokunye okuningi. I-Google Home futhi ikuvumela ukuthi ube nesikhathi esilula sokusakaza isikrini somculo, ividiyo, noma iphrezentheshini kusuka ku-Display eyodwa noma idivaysi kwenye. Isibonelo, uma usakaza i-YouTube kusiphequluli sewebhu se-PC yakho, ungakhetha inketho yokulingisa bese uxhuma ku-Google Home Speakers ehambisanayo ukuqhumisa umculo osendlini yakho.
Sekukonke, iyinethiwekhi esobala yawo wonke amadivayisi ukuze kutholakale kalula ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi kusethaphu, ukungena ngemvume nezinye izidingo ezifanayo.
Ungafinyelela Ikhaya le-Google Nge-PC?
Kukhona indlela eyodwa yokufinyelela i-Google Home nge-PC, okungukuthi ngokufaka i-emulator ye-Android. Akuyona inqubo engekho emthethweni. Ngakho-ke, ungalanda i-premium noma ejwayelekile I-Android Emulator ku-PC yakho futhi ufinyelele ekhaya le-Google ukusuka lapho.
Izonikeza ukufinyelela kusici esigcwele sohlelo lokusebenza lwe-Google Home olutholakala kwamanye amapulatifomu. Kodwa-ke, ingahle ikhawulelwe kumsizi we-Google njengoba izosebenza ngaphansi kwe-emulator kahle futhi ngeke ikusebenzele i-PC yakho.
Ngenye indlela, ungafunda ukusebenzisa umyalo wezwi ngomsebenzi we-'s cast 'wesiphequluli ukuze ufinyelele kangcono. Kodwa-ke, awufanele umzamo.
Ukukhululeka Kwe-Google Chrome:
Isiphequluli sewebhu se-Google Chrome sikulethela ukufinyelela kwezinye izici ezikhawulelwe ze-Chrome cast ku-PC. Ngalokhu, udinga inguqulo yakamuva ye-chrome, futhi i-Wifi efanayo namanye amadivayisi we-chrome axhunywe kuyo.
Uma usebenzisa inketho yokusakaza ye-Google chrome, ungasakaza uye kwamanye amadivayisi e-Chromecast. Kodwa, awukwazi ukulawula ikhaya le-Google. Ngokufanayo, awukwazi ukwengeza, ukwenza ngezifiso, noma ukuguqula noma iyiphi idivayisi ku-Google Home. Ngakho-ke, kukhawulelwe kakhulu.
Ingabe Umsizi Wezwi Uyasiza?
Ukufaka umsizi we-Google Voice ku-PC yakho ngeke kukunikeze amandla okufinyelela amasevisi e-Google Home. Ngokuqinisekile inciphisa inqubo yokusebenzisa i-PC yakho, kepha ngeke ikulethe isikhathi esiningi sokuphumula ku-Google Home. Ngokufana nenketho yokusakaza ye-Chrome, ungayifinyelela ngomsizi wezwi we-Google. Kodwa-ke, yilokho kuphela ongakwenza ngakho.
Sekukonke, inketho engcono kakhulu kuwe kungaba ukusebenzisa i-emulator ye-Android ku-PC bese ufaka iGoogle Home ukufinyelela amadivayisi ukusuka lapho.
Ungasisebenzisa kanjani i-Cast On Chrome Browser?
Landela lezi zinyathelo ezilula ukusakaza noma yini kusuka kusiphequluli sakho se-Chrome uye kumadivayisi we-Google Home:
Ku-Chrome, vula imenyu oyisebenzisela amathebhu amasha noma ukufinyelela izilungiselelo
Kuleyo menyu, uzothola inketho ethi 'cast'
Mane uchofoze kuyo, bese izoqala ukufuna amadivayisi
Uma isitholile idivayisi, ungaxhuma futhi usakaze okuqukethwe ngqo kuleyo divayisi
Khumbula ukuthi womabili amadivayisi adinga ukuxhumeka ku-Wifi efanayo.
Iyiphi inketho ehamba phambili yokusebenzisa i-Google Home ku-PC?
Njengoba kushiwo ngenhla, i-Android Emulators efana neBlueStacks iyindlela engcono yokusebenzisa iGoogle Home ngePC yakho. Noma kunjalo, ungahlangabezana nenkinga ethile yokuxhumana. Kungenzeka kungabe kusaba nenketho yeKhaya le-Google lama-PC njengokuthi akubanga khona izinhlelo zokusebenza eziningi ze-Google zama-PC ngokujwayelekile.
Ingabe i-Chromecast izosiza ukusebenzisa i-Google Home ku-PC?
I-Chromecast iyidivayisi esezingeni elihlangene nelezinga lokungena eliguqula i-TV yakho ejwayelekile noma ukuqapha isibonisi sibe yi-smart TV ukufinyelela ukuzijabulisa. I-Chromecast yakho ingaxhuma kuhlelo lokusebenza lwe-Google Home, kodwa ngeke isebenze njengebhuloho lokuxhuma i-PC yakho ku-Google Home.
Ngamanye amagama, i-Display izosebenza njengengxenye yamadivayisi we-Google Home. Ngaphandle kwalokhu, i-PC, izici zayo, amafayela, nakho konke okunye kusengatholakali kalula. Ngakho-ke, i-Chromecast ayikwazi ukukusiza ukuthi uthole noma yiluphi uhlobo lokuxhuma. Ayikho indlela ebonakalayo yokuyidlula noma.
Kungcono ukwamukela i-Google Home App ukuthi iyini, ihabhu lokuhlela amadivayisi akho ahambisanayo ahambisana ne-Google. Ergo, i-PC yakho iyipulatifomu ehluke ngokuphelele ngohlelo Lokusebenza nezidingo ezihlukile.
Inketho yokusakaza ye-Chrome iyona engcono kakhulu ongayethemba ekufinyeleleni kohlelo lokusebenza lwe-Google Home. Kodwa-ke, uma uthatha isinqumo sokusebenzisa i-Emulator, amathuba ayanda. Leyo yindlela enhle yokwenza njalo. Ukuphela kokufanele ukwenze ukulanda i-emulator, bese uhlelo lokusebenza lwe-Google Home, bese ulisebenzisa ngendlela obungayisebenzisa ngayo kudivayisi ye-Android.
Ikusasa aliqinisekile, futhi iGoogle ingakhipha okuthile okuhle kubasebenzisi ukuxhuma ama-PC abo. Kuze kube yileso sikhathi, lezi izindlela zakho ezinhle kakhulu nezingokomthetho zokusebenzisa i-Google Home App ye-PC.
Kik Messenger ku-PC
I-Grand Army Isizini 2: Ivuselelwe noma Ikhanseliwe yiNetflix?
Gentefied Isizini 3: Izibuyekezo Odinga Ukuzazi Namuhla!